I-Middle Earth Yurt ~ Bush Glampingwagenrahdale - I-Airbnb
I-Middle Earth Yurt ~ Bush Glampingwagenrahdale
Jarrahdale, Western Australia, i-Australia
Ikamelo e-itende ibungazwe ngu-Phil
Siyakwamukela endaweni yethu enhle ye- ‘Middle Earth Yurt' ezungezwe ihlathi lombuso (elinemizila eminingi yokuhamba) endaweni enkulu emagqumeni angaphansi kwehora elilodwa uhamba ngemoto usuka e-Perth noma e-Fremantle.
Leli tende elintofontofo kakhulu elinamapulangwe amahlanu linendawo enhle yokhuni ye-jarrah, umatalasi omkhulu owephuzile, ukukhanya okusebenza nge-solar kanye nesistimu enhle yomsindo ye-hifi (uxhumano olulula lwe-Bluetooth) nesitofu somlilo sezinkuni (ukusetshenziswa kwezinyanga ezipholile/zasebusika kuphela), izinkuni zomlilo ezinikeziwe. Jabulela !
Kukhona indawo yokukhempa ehlanganyelwayo yangaphandle (i-bush shower), izindlu zangasese, nekhishi lokukhempa elinetiye nekhofi lokuhamba umzuzu owodwa nje eduze kwe- ‘Big Sky Yurt'. Isidlo sasekuseni nesidlo sakusihlwa singanikezwa ngesicelo, sithunyelwe etendeni lakho, ngokuvamile ngemikhiqizo ekhulayo yekhaya, i-vegetarian, i-vegan nezinye izinketho noma izicelo ezitholakalayo noma wamukelekile ukupheka okungokwakho. Sicela futhi ufunde ‘ezinye izinto okufanele uziphawule'.
Futhi SICELA UQAPHELE, uma usubhukhile ungafunda futhi imanyuwali yendlu ukuze uthole eminye imininingwane ehlanganisa ibalazwe elinemizila yokuhamba nezindawo ezithandwayo eduzane, futhi sicela ubhekane nakho konke ukuxhumana lapha ngemiyalezo ye-Airbnb eya ku- ‘Phil noSarah' abenza umsebenzi omuhle wokunakekela wonke ama-yurt nezivakashi ezisendlini.
Ngithemba ukuthi uzohlala kahle kakhulu uma unquma ukuza futhi mhlawumbe ngizokubona lapha, ngiyabonga nezilokotho ezinhle okwamanje, Alan.
4.95 · 218 okushiwo abanye
Eduzane yidolobha elingokomlando lamapulangwe lase-Jahrahdale lapho kunesitolo esivamile/ihhovisi lokuposa, i-cafe, i-tavern nesitolo esipholile kakhulu 'itiye' phakathi kwezinye izinto.
Kuze kufike ezitolo ezinkulu kukhona i-IgA e-Mundijong okuyizitolo ezinkulu eziseduze nezitolo ezinkulu njll e-Byford noma e-Armadale.
Hlola ezinye izinketho ezise- Jarrahdale namaphethelo